မာရှယျကို ကြောနံပါတျ ၉ပေးအပျအပွီးမှာ နညျးပွဆိုးလျရှားက ဘာပွောခဲ့သလဲ ! - SPORTS MYANMAR
မာရှယျကို ကြောနံပါတျ ၉ပေးအပျအပွီးမှာ နညျးပွဆိုးလျရှားက ဘာပွောခဲ့သလဲ !
By Edi Tor October 20, 2019
ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈတှအေတှငျး အားအထားရဆုံး တိုကျစဈ ကစားသမား တဦးဖွဈတဲ့ လူကာကူ ကို အခုနှမှောအငျတာမီလနျ အသငျး ကိုရောငျးထုတျထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လညျး တိုကျစဈက တပှဲတဂိုးတောငျ ရဖို့ ရုနျးကနျနခေဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
သူတို့ဟာ နောကျထပျ တိုကျစဈ ကစားသမားတဦးဖွဈတဲ့ ဆနျးခကျြကို ပါအဆိုပါ မီလနျ မွို့ခံအသငျးထံကို အငှား ခထြားခဲ့လို့ မာရှယျနဲ့ ရတျဖို့ဒျ ၂ဦးတညျးကိုသာအားကိုးနရေတာဖွဈပါတယျ။သူတို့နှဈဦးတပွိုငျနကျတညျးဒဏျရာရှိနခြေိနျမှာ တော့လူငယျလေး ဂရငျးဝုဒျကို အသုံးပွုထားခဲ့ပမေယျ့ထငျသလောကျတော့ အားကိုးလို့မရသေးတာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ နညျးပွကွီး ဆိုးလျရှား ဟာနှရောသီမှာ ရောငျးထုတျခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူး လူကာကူရဲ့ ကြောနံပါတျ၉ ကို မာရှယျထံလှဲပွောငျး ပေးအပျခဲ့ပွီး အခနျးကဏ်ဍ သဈတရပျကို လညျး တာဝနျပေးအပျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။မာရှယျဟာပွီးခဲ့တဲ့ နှဈတှအေတှငျးမှာတော့ ကြောနံပါတျ ၁၁ ကိုသာ၃ရာသီလောကျဝတျဆငျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မာရှယျဟာပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ယူနိုကျတကျ အသငျးအတှကျ လိဂျဂိုး ၁၀ ဂိုးသှငျးယူပေးနိုငျခဲ့ပွီး အခုအခြိနျမှာ ဂိုးတှပေိုသှငျးယူနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့နတောဖွဈပါတယျ။သူဟာ ဒီရာသီအဖှငျ့ ၂ပှဲ မှာ ၂ဂိုးသှငျးယူထားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲစဉျမှာရခဲ့တဲ့ပေါငျ ဒဏျရာကွောငျ့ပှဲတှနေဲ့ ဝေးနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ ယနညေ့မှာ အင်ျဂလနျ ဒါဘီ ပှဲစဉျအဖွဈ လီဗာပူး အသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျရဖို့ရှိနပွေီး ဒီပှဲမှာ မာရှယျပါဝငျနိုငျဖို့ရှိမရှိကို ဆိုးလျရှားက အတညျပွုထားခွငျးမရှိသေးတာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျးဆိုးလျရှားက သူ့အပျေါဘယျလောကျအထိမြှျောလငျ့ထားတယျဆိုတာကို မာရှယျက နားလညျထားပုံပါပဲ။
Inside United နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ မာရှယျက – ” အခုတော့ ကြောနံပါတျ ၉ဂြာစီကို ကြှနျတျောပွနျရခဲ့ပါပွီ။ ဆိုးလျရှားက ကြှနျတေျာ့ကို ပွောခဲ့တာကတော့ ကြှမျတေျာ့မှာ တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှုတှပေိုမြားလာနခေဲ့လို့ဂိုးတှကေို မဖွဈမမေ သှငျးယူပေးရတော့မယျ့ကိစ်စဖွဈပါတယျ။ဒါကိုလညျး ကြှနျတျောကွိုးစား လုပျဆောငျနပေါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ကတော့လှပတဲ့ ဂိုးတှကေိုပဲ သှငျးယူ ခငျြကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျးအဆုံးသတျမှာတော့ သှငျးတဂိုးက သှငျးဂိုးတဂိုးပါပဲ။ဒါကွောငျ့လညျး ခြဲဆီးလျနဲ့ပှဲမှာ သှငျးခဲ့တဲ့ ဂိုးတှလေိုဂိုး၃၀ လောကျသှငျးယူထားနိုငျရငျလညျးဒီလိုပဲပွောမှာဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောဟာ လှပတဲ့ ဂိုးတှကေို သှငျးယူခငျြခဲ့တယျဆိုတာကို ကိုယျ့ကိုယျကို ခနျ့မှနျးမိပါတယျ။တကယျလို့သာ အဲ့လို ဂိုးတှေ ထပျပွီးသှငျးယူနိုငျမယျဆိုရငျ လညျး ကြှနျတျောကတော့ ရာသီ အဆုံးသတျခြိနျမှာ ဂိုးတှပေိုပွီး အမြားကွီးနဲ့ အဆုံးသတျဖို့ကိုပဲ စိတျဝငျစားပါတယျ ” လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ နောကျဆုံးပရီးမီးယားလိဂျ ၃ပှဲမှာ ဝကျဈဟမျးနဲ့ နယူးကာဆယျတို့ကို ရှုံးနိမျ့ထားပွီး အာဆငျနယျအသငျးကို သရကေစားထားပါတယျ။သူတို့ဟာ လတျတလောမှာ အဆငျ့ ၁၄ နရောအထိကို ကဆြငျးနပေါတယျ။ယနညေ့မှာ ရငျဆိုငျရဖို့ရှိနတေဲ့ လီဗာပူး အသငျးကတော့ ၈ပှဲကစား ၈ပှဲအနိုငျနဲ့ အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးမှာ တကောငျတညျးပွေးနတေဲ့ အသငျးလညျးဖွဈပါတယျ။
မာရှယ်ကို ကျောနံပါတ် ၉ပေးအပ်အပြီးမှာ နည်းပြဆိုးလ်ရှားက ဘာပြောခဲ့သလဲ !
ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်း အားအထားရဆုံး တိုက်စစ် ကစားသမား တဦးဖြစ်တဲ့ လူကာကူ ကို အခုနွေမှာအင်တာမီလန် အသင်း ကိုရောင်းထုတ်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း တိုက်စစ်က တပွဲတဂိုးတောင် ရဖို့ ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ နောက်ထပ် တိုက်စစ် ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့ ဆန်းချက်ကို ပါအဆိုပါ မီလန် မြို့ခံအသင်းထံကို အငှား ချထားခဲ့လို့ မာရှယ်နဲ့ ရတ်ဖို့ဒ် ၂ဦးတည်းကိုသာအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးတပြိုင်နက်တည်းဒဏ်ရာရှိနေချိန်မှာ တော့လူငယ်လေး ဂရင်းဝုဒ်ကို အသုံးပြုထားခဲ့ပေမယ့်ထင်သလောက်တော့ အားကိုးလို့မရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် နည်းပြကြီး ဆိုးလ်ရှား ဟာနွေရာသီမှာ ရောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး လူကာကူရဲ့ ကျောနံပါတ်၉ ကို မာရှယ်ထံလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အခန်းကဏ္ဍ သစ်တရပ်ကို လည်း တာဝန်ပေးအပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာရှယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်းမှာတော့ ကျောနံပါတ် ၁၁ ကိုသာ၃ရာသီလောက်ဝတ်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မာရှယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ယူနိုက်တက် အသင်းအတွက် လိဂ်ဂိုး ၁၀ ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာ ဂိုးတွေပိုသွင်းယူနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ဒီရာသီအဖွင့် ၂ပွဲ မှာ ၂ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာရခဲ့တဲ့ပေါင် ဒဏ်ရာကြောင့်ပွဲတွေနဲ့ ဝေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ယနေ့ညမှာ အင်္ဂလန် ဒါဘီ ပွဲစဉ်အဖြစ် လီဗာပူး အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပြီး ဒီပွဲမှာ မာရှယ်ပါဝင်နိုင်ဖို့ရှိမရှိကို ဆိုးလ်ရှားက အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်းဆိုးလ်ရှားက သူ့အပေါ်ဘယ်လောက်အထိမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာကို မာရှယ်က နားလည်ထားပုံပါပဲ။
Inside United နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ မာရှယ်က – ” အခုတော့ ကျောနံပါတ် ၉ဂျာစီကို ကျွန်တော်ပြန်ရခဲ့ပါပြီ။ ဆိုးလ်ရှားက ကျွန်တော့်ကို ပြောခဲ့တာကတော့ ကျွမ်တော့်မှာ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတွေပိုများလာနေခဲ့လို့ဂိုးတွေကို မဖြစ်မမေ သွင်းယူပေးရတော့မယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့လှပတဲ့ ဂိုးတွေကိုပဲ သွင်းယူ ချင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းအဆုံးသတ်မှာတော့ သွင်းတဂိုးက သွင်းဂိုးတဂိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်း ချဲဆီးလ်နဲ့ပွဲမှာ သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုးတွေလိုဂိုး၃၀ လောက်သွင်းယူထားနိုင်ရင်လည်းဒီလိုပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ လှပတဲ့ ဂိုးတွေကို သွင်းယူချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခန့်မှန်းမိပါတယ်။တကယ်လို့သာ အဲ့လို ဂိုးတွေ ထပ်ပြီးသွင်းယူနိုင်မယ်ဆိုရင် လည်း ကျွန်တော်ကတော့ ရာသီ အဆုံးသတ်ချိန်မှာ ဂိုးတွေပိုပြီး အများကြီးနဲ့ အဆုံးသတ်ဖို့ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ် ၃ပွဲမှာ ဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ နယူးကာဆယ်တို့ကို ရှုံးနိမ့်ထားပြီး အာဆင်နယ်အသင်းကို သရေကစားထားပါတယ်။သူတို့ဟာ လတ်တလောမှာ အဆင့် ၁၄ နေရာအထိကို ကျဆင်းနေပါတယ်။ယနေ့ညမှာ ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတဲ့ လီဗာပူး အသင်းကတော့ ၈ပွဲကစား ၈ပွဲအနိုင်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးမှာ တကောင်တည်းပြေးနေတဲ့ အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။